Dhambaal W/Q: Ramla Gobdoon - Daryeel Magazine
In kasta oo aan aad u dhib badnaa yaraannimadaydii madax adeegna uu ii raacsanaa haddana waad ila jirtay mar walba. Maalin aad igu xanaaqday ayaan xusuustaa. Laftirkaagu waad yarayd oo wax badan iga ma waynayn. Maalintaas waan murugooday. Waxa aan ka baqay in aan ku waayo oo aadan dib iigu soo laaban. Aniga ayaa dambiga lahaa, waayo hadalkaaga ayaan qaadan waayay. Adiga ayaase ii yimid oo i raalligeliyay. Alla maxaad qof wacan ahayd!
Wixii intaa ka dambeeyay waa anigii gudaha u galay guriga. Reerku in ay ladnaayaan waxaa laga garan karay guriga ay degnaayeen. Habeenkaa in aan guriga ku dhex dhumo ayaan ka baqay oo aan garan waayo meel aan ka soo baxo. Nalalka bixinayay iftiinka ka la duwanaa ayaa marba midab u yeelayay dadkii gudaha ku jiray iyo muuqaalka meeshuba. Intii aan korontooyada dhex socday ayaan arkay kii aan kaaga sheekeeyay. Kii aan kuu sheegay in aan la dhacay oo xaafadda ku cusbaa. Waa innagii mar bas wada raacnay. Markaas ayuu magaciisa ii sheegay, kolkaan arkay isaga oo meel gees ah taleefankiisa la taagan ayaan ku leexday. Waliba magaciisa ayaan kor ugu dhawaaqay. Alla geesisaniyaayeey! Maya, anigu ma ahayn wixii u yeeray. Wax ayaa iga hadalsiinayay kolleey. Habeenkaa jawi deggan ayuu ku jiray sidaa darteed si fiican oo furfuran ayay sheekadu noogu baxday. Gabadhihii xaafadda degnaa oo dhan ayaan gudaha ku arkay oo wada sheekeesannay. Wixii intaa ka dambeeyay qof meesha ka casuuman ayaan u ekaaba, gebagabadiina isaga ayaa i soo kaxeeyay oo xaafadda ii soo raacay.
Saaxiibkayoow marka aan dib kuu arko wax walba ayaan kaaga sheekayn doonaa. Waxa aan kaaga sheekayn doonaa waxyaabihii inoo ka la dambeeyay oo dhan. Kaliya marka aan dib kuu arko ayaan sheegi doonaa sirar badan oo aad keligaa ogaanayso. Marka u horaysa ee aan dib u kulanno waxa aan ku siin doonaa hab dheer oo adag. Ila ma ahan in aan si fudud kuu dayn doono. Ma xisaabin doono inta ay habtaasi qaadanayso. Maba daneenayo middaas. Laabtaadii diirrnayd, dabacsanayd ee jacaylka iyo naxriistu ay ka buuxeen miyaan si fudud uga dhex bixi karaa? Ha sheegin. Bes inaan adiga ku arko, ka dibna ha dhacaan wax kastoo dhici lahaa. Intaas ka dib ayaan kuu bilaabi doonaa wixii aan kuu hayay oo dhan. Maya, adiga ayaa i bilaabaya. Mise anigaa ku hor mara? Maya, waad ogtahay in aan warka iyo sheekadaba jeclahee adiga ayaa bilaabaya. Alla maxaan u xiiso qabaa sheekooyinkaaga! Taloow meeqo sheeko ayaad ii haysaa? Labaatan ma gaarayaan? Waa ay ka badan yihiin ayay ila tahay.
Saaxiibkayoow waan ku jeclahay. Si wayn waliba oo ballaaran. Aniga oo aanan ogayn meel aad ku dambayso, meel aad joogto iyo meel aan kaa heli karo ayaan farriintan kuu soo dirayaa. Haddii ay warqaddan ku soo gaarto, waan filayaayee, waxaa aad ogaataa in aan ku jeclahay. In aan xiisahaaga la liito oo aan adiga ku sugayo. In aan kuu soo duceeyo mar walbo oo aan kaa fekero. Waxa aan kuu rejaynayaa in aad ku nabad iyo bad qabto halka aad joogto. Farxad aan kaa dhammaan iyo nolol xasillan ayaan kuu filayaa in aad ku jirto, waligaana aad ku jirtid.
Warqaddan qoraalkeeda halkan ayaan ku joojinayaa. Ma sii wadi karo. Haddii aan sii wadana waxa aan ku qasbanaan doonaa in aan ilmeeyo. Lacalla haddii ay dhacdo in aad aragto warqaddan, waxa aad ogaataa in ay kuu soo qortay saaxiibaddaadii rumayd. Saaxiibaddaadii aad jaclayd. Saaxibaddaadii aad u la dhaqmi jirtay sidii walaal kaa yaraa oo kale. Xilligan aan warqaddan kuu qorayo waxa aan joogaa wabi wayn agtiisa. Dabeesha ayaan ka dalbanayaa in ay farriintan kuu soo qaaddo. Waa intaasoo ay agtaada ku soo dhacdo iyada oo biibaysa. Saaxiibkayoow waan ku jeclahay. Taloow kor ma ku xusay in aan ku jeclahay mise waan kaa illoobay? Is ka daa hadda ayaan kuu sheegayaayee.
Dhambaal Jacayl Oo Xiiso Badan DHAMBAAL: Raali Galin Qof Aad Jeceshahay Calaamado Cadayn u ah in aad tahay Qof aan Go’aan Gaari Karin Waxyaabo ku badbaadin kara Insha Allah